Deg Deg: Warbixin iyo Sawiro Khasaaraha weerarkii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay degmada Wadajir - Wargane News
Home Somali News Deg Deg: Warbixin iyo Sawiro Khasaaraha weerarkii ismiidaaminta ahaa ee...
Deg Deg: Warbixin iyo Sawiro Khasaaraha weerarkii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay degmada Wadajir
Waxaa isa soo taraya khasaaraha ka dhashay weerar ismiidaamin ah duhurnimadii maanta lagu qaaday xarunta degmada Wadajir ee gobolka Banaadir.
Weerarkan ayaa loo adeegsaday gaari nooca CAASIGA ah oo laga soo buuxiyay walxaha qaraxa, hasse ahaatee la sheegay in ay u suurtagashay in uu gaaro xarunta degmada, kaddib markii loo soo ekeysiiyay gadiidka khudaarta iyo caanaha keena kuwaa oo inta badan lagu canshuuro xarunta degmada.
Goob joogayaal ah oo aan la xiriirnay ayaa inoo sheegay qaraxa oo ahaa mid xoogan khasaare ballaaran u geystay xarunta iyo guud ahaanba dhimayaashii ka agdhawaa oo bur bur xoogan soo gaaray.
Tirada dhimashada ayaa la sheegay in ay gaartay 15 ruux, halka gadiidka gurmadka deg deg ah halkaa ka qaadeen dhaawacyada dad u badnaa rayid kuwaa oo la kala geeyay goobaha caafimaadka magaalada Muqdisho.
Wararka qaar ayaa sheegaya in dadka ku dhaawacmay qarax uu ka mid yahay guddoomiyaha cusub ee degmada Wadajir Cumar C/llaahi Xassan iyo qaar ka mid ah ilaaladiisa.
Xarunta la weeraray ayaa siweyn ugu dhaw Suuqa degmada Wadajir oo ka mid ah Suuqyada ugu mashquulka badan magaalada Muqdisho.
Waxaa halka uu qaraxa ka dhacay ku sugan ciidamada amniga dowladda Soomaaliya oo xiray dhamaanba jidadka soo gala goobta uu qaraxa ka dhacay, waxaana jira meydad wali laga soo saarayo dhismayaasha bur buray hoostooda.
Somaliland: Masuuliyiin iyo Xubno kasoo jeeda Gobolka Maroodijeex oo iska Casilay Xisbiga Waddani